ဝပြီး ဗိုက်စူသူများအတွက် သင်္ဘောသီးဓာတ်စာ – MyanmarUpdates
ဝပြီး ဗိုက်စူသူများအတွက် သင်္ဘောသီးဓာတ်စာ
ဝလာသူများတွင် ဝခြင်း အကြောင်းအရင်း နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမ တစ်မျိုးမှာ အဆီတိုးပြီး မျိုးရိုးအလိုက် ဝသူမျိုးဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ အသက် ၄ဝ ကျော် ၅ဝ တွင် ရောက်မှ ဝလာသူ (လေဝဟု ခေါ်သည်) များဖြစ်သည်။
မျိုးရိုးအလိုက်ဝသူ၊ အဆီတိုး၍ ဝသူများမှာ ကိုလက်စထရော တက်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ကောင်းသော ကိုလက်စထရော (HDL Cholesterol) များလျှင် ဝသော်လည်း ကျန်းမာပြီး သွားနိုင်၊ စားနိုင်၊ ဝမ်းမှန်၊ အိပ်ပျော် နေကောင်း နေပေသည်။အသက်ကြီးမှ ဝလာသူများမှာ ကျန်းမာရေး ချူချာတတ်သည်။
မျက်နှာနှင့် လက်ချောင်းများတွင် မဝပဲ ဗိုက်စူ ထွက်လာသဖြင့် ဝလို့လှလို့ မဖြစ်နိုင်ပေ။ လမ်းလျှောက် နည်းပြီး အထိုင်များလျှင် ပိုဆိုးသည်။ ဗိုက်သိသိသာသာ စူထွက် လာပြီး ကြည့်မကောင်းသောအခါ ဘီယာဗိုက်ဟု ခေါ်ကြသည်။ စည်ဘီယာ အသောက်များ သူများတွင် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ် သည်။
အမှန်မှာ ညနေစောင်းနှင့် ညအချိန်မတော် စားလေ့ရှိသူ များတွင် ဝမ်းဗိုက် အတွင်းရှိ အူမကြီးတွင် အစာများစုပုံပြီး အစာမကြေရာမှ လေပွပြီး ဗိုက်စူလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ညစာစားခြင်းကို လျှော့လိုက်လျှင် ဗိုက်စူခြင်းသည် ပြန်၍ သက်သာ သွားတတ်သည်။လေဝ ဝသူများ၏ အဓိကချို့ယွင်းချက်မှာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကောက်ညှင်း၊ ဆန်စေး၊ အုန်းထမင်း၊ ဒန်ပေါက်၊ အကြော် အလှော်နှင့်အကင်များ စားသည့် နေ့တွင် အစာမကြေဖြစ်ပြီး ပို၍ပင် ဝမ်းချုပ်လေ့ရှိသည်။ ဝမ်းချုပ်သောအခါ ဗိုက်က ပို၍ စူထွက်လာပြီး အသက်ရှူ မဝသော ရောဂါ ဖြစ်တတ်သည်။ဗိုက်စူ ဝမ်းချုပ်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်စာမှာ သင်္ဘောသီး မှည့် ဖြစ်သည်။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း သင်္ဘောသီးမှည့် တစ်ခြမ်းခန့် စားပေးခြင်းဖြင့် ဝမ်းမှန် လေ သက်သည့် အပြင် ဝမ်းဗိုက်စူခြင်း ကိုပါ သက်သာ စေနိုင်သည်။
သင်္ဘောသီးတွင် အစာကြေစေသော အစေး ဓာတ်ပါသဖြင့် အစိမ်းကိုလည်း ဟင်းချက် စားနိုင်သည်။ အမှည့်ကို စားလျှင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် စမြင်းခံခြင်း ကိုပါ သက်သာ စေနိုင်သဖြင့် လိပ်ခေါင်း ရှိသူများ အတွက်ပါ သက်သာ စေသည်။သင်္ဘောသီးဝယ်လျှင် သတိပြုရန်မှာ ဆိုးဆေးနှင့် မှည့်ဆေးမလွတ်သော အသီး ရှောင်ရန်ဖြစ်သည်။
သဘာဝ ပင်မှည့်အသီးကို ဝယ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါက ရင့်သော သင်္ဘောသီး အစိမ်းကိုဝယ်ပြီး မိမိအိမ်တွင် မှည့်အောင် စောင့်ထား ပြီးမှ စားသုံးပါ။ နေ့စဉ် မှန်မှန် တစ်လခန့် စားသုံးကြည့်ပါက အကျိုး ကျေးဇူးကို သိလာပါလိမ့်မည်။
ဝလာသူမြားတှငျ ဝခွငျး အကွောငျးအရငျး နှဈမြိုးရှိသညျ။ ပထမ တဈမြိုးမှာ အဆီတိုးပွီး မြိုးရိုးအလိုကျ ဝသူမြိုးဖွဈပွီး နောကျတဈမြိုးမှာ အသကျ ၄ဝ ကြျော ၅ဝ တှငျ ရောကျမှ ဝလာသူ (လဝေဟု ချေါသညျ) မြားဖွဈသညျ။
မြိုးရိုးအလိုကျဝသူ၊ အဆီတိုး၍ ဝသူမြားမှာ ကိုလကျစထရော တကျသညျဟု ဆိုသျောလညျး ကောငျးသော ကိုလကျစထရော (HDL Cholesterol) မြားလြှငျ ဝသျောလညျး ကနျြးမာပွီး သှားနိုငျ၊ စားနိုငျ၊ ဝမျးမှနျ၊ အိပျပြျော နကေောငျး နပေသေညျ။အသကျကွီးမှ ဝလာသူမြားမှာ ကနျြးမာရေး ခြူခြာတတျသညျ။
မကျြနှာနှငျ့ လကျခြောငျးမြားတှငျ မဝပဲ ဗိုကျစူ ထှကျလာသဖွငျ့ ဝလို့လှလို့ မဖွဈနိုငျပေ။ လမျးလြှောကျ နညျးပွီး အထိုငျမြားလြှငျ ပိုဆိုးသညျ။ ဗိုကျသိသိသာသာ စူထှကျ လာပွီး ကွညျ့မကောငျးသောအခါ ဘီယာဗိုကျဟု ချေါကွသညျ။ စညျဘီယာ အသောကျမြား သူမြားတှငျ ထိုကဲ့သို့ ဖွဈတတျသောကွောငျ့ ဖွဈ သညျ။
အမှနျမှာ ညနစေောငျးနှငျ့ ညအခြိနျမတျော စားလရှေိ့သူ မြားတှငျ ဝမျးဗိုကျ အတှငျးရှိ အူမကွီးတှငျ အစာမြားစုပုံပွီး အစာမကွရောမှ လပှေပွီး ဗိုကျစူလာခွငျး ဖွဈသညျ။ ညစာစားခွငျးကို လြှော့လိုကျလြှငျ ဗိုကျစူခွငျးသညျ ပွနျ၍ သကျသာ သှားတတျသညျ။လဝေ ဝသူမြား၏ အဓိကခြို့ယှငျးခကျြမှာ ဝမျးခြုပျခွငျး ဖွဈသညျ။
ကောကျညှငျး၊ ဆနျစေး၊ အုနျးထမငျး၊ ဒနျပေါကျ၊ အကွျော အလှျောနှငျ့အကငျမြား စားသညျ့ နတှေ့ငျ အစာမကွဖွေဈပွီး ပို၍ပငျ ဝမျးခြုပျလရှေိ့သညျ။ ဝမျးခြုပျသောအခါ ဗိုကျက ပို၍ စူထှကျလာပွီး အသကျရှူ မဝသော ရောဂါ ဖွဈတတျသညျ။ဗိုကျစူ ဝမျးခြုပျသူမြားအတှကျ အကောငျးဆုံး ဓာတျစာမှာ သင်ျဘောသီး မှညျ့ ဖွဈသညျ။ ထမငျးစားပွီးတိုငျး သင်ျဘောသီးမှညျ့ တဈခွမျးခနျ့ စားပေးခွငျးဖွငျ့ ဝမျးမှနျ လေ သကျသညျ့ အပွငျ ဝမျးဗိုကျစူခွငျး ကိုပါ သကျသာ စနေိုငျသညျ။
သင်ျဘောသီးတှငျ အစာကွစေသေော အစေး ဓာတျပါသဖွငျ့ အစိမျးကိုလညျး ဟငျးခကျြ စားနိုငျသညျ။ အမှညျ့ကို စားလြှငျ ဝမျးခြုပျခွငျးနှငျ့ စမွငျးခံခွငျး ကိုပါ သကျသာ စနေိုငျသဖွငျ့ လိပျခေါငျး ရှိသူမြား အတှကျပါ သကျသာ စသေညျ။သင်ျဘောသီးဝယျလြှငျ သတိပွုရနျမှာ ဆိုးဆေးနှငျ့ မှညျ့ဆေးမလှတျသော အသီး ရှောငျရနျဖွဈသညျ။
သဘာဝ ပငျမှညျ့အသီးကို ဝယျရနျ မဖွဈနိုငျပါက ရငျ့သော သင်ျဘောသီး အစိမျးကိုဝယျပွီး မိမိအိမျတှငျ မှညျ့အောငျ စောငျ့ထား ပွီးမှ စားသုံးပါ။ နစေ့ဉျ မှနျမှနျ တဈလခနျ့ စားသုံးကွညျ့ပါက အကြိုး ကြေးဇူးကို သိလာပါလိမျ့မညျ။
Originally posted 2018-11-02 13:23:05.
We will keep you updated with latest Myanmar celebrity news, Knowledge, Educations and Healthcare news.
© 2019 MyanmarUpdates